အကောင်းဆုံး Flow Rapid ဆိုးဆေးစက် 110 OverC ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံးအရည်အသွေး Flow Rapid ဆိုးဆေးစက် 110 OverC ကိုရှာဖွေရန်။
ကျနော်တို့ကဦးဆောင်ဦးရွက်နှင့်နည်းပညာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတင်ပို့, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူများမှာ Flow Rapid ဆိုးဆေးစက် 110 OverC။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတမ်းထုံးစံစုပေါင်းစုပ်စီမံကိန်းများအပေါ်ယူဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ နှစ်တွေကျနော်တို့အများဆုံးစျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်-on အချိန်ပေးအပ်ခြင်းနှင့်အတူအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များပေးအပ်များအတွက်ဂုဏ်သတင်းကိုတည်ဆောက်လေပြီ။ ကျနော်တို့တရားမျှတတဲ့ဈေးနှုန်းများမှာအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များအမြန်ဆုံးပေးပို့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအများအပြားဖောက်သည်တစ်ဦး "ကြိုက်နှစ်သက်ရာကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း" ဖြစ်လာကြပါပြီစတာတွေကမ္ဘာတဝှမ်းဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု, အမေရိကန်, ကနေဒါ, ဥရောပ, အိန္ဒိယ, ဂျပန်ပေးစွမ်းပါသည်။
ပုံစံ - AM-OAE
110&ထုံးစံအတိုင်း;Flow Rapid ဆိုးဆေးစက်ကျော်
ထို့အပြင် tank ၏သွယ်ဝိုက်ရောစပ်စနစ်.
တစ်ခုချင်းစီကိုအခန်းထဲရှိ Teflon စာရွက်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.dyeing-machine.com/my/110c-over-flow-rapid-dyeing-machine-1.html
အသိဉာဏ်ပေါ်သယ်ဆောင်မြင့်မားသောဖိအားစဉ်ဆက်မပြတ်အမြန်ဆေးဆိုးစက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်မူပိုင်ခွင့်နှင့်အတူမျိုးဆက်သစ်ဆေးဆိုးစက်. တော်လှန်ရေးသမားဆန်းသစ်တီထွင်မှု,ပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေ. 65 ကျော်ကိုသိမ်းပါ%ရေ,ရေနွေးငွေ့,လျှပ်စစ်ဓာတ်အား,နှင့်အရန်,65 လျှော့ချ%ရေဆိုးနှင့် CO2 ထုတ်လွှတ်မှု၏. အစွန်းရောက်အနိမ့်နှင့် uni-အရက်အချိုး:၁:2.5~3.5 ရေကိုချွေတာ,ရေနွေးငွေ့,စွမ်းအင်,ထက်ပိုမို 65 အားဖြင့်ဓာတုစားသုံးမှုနှင့် effluent~75%ရိုးရာဆေးဆိုးစက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ. optional ကို devices များအထူးလုပ်ဆောင်ချက်များကို: မြင့်မားသောအပူချိန်မြင့်မားသောဖိအားယိုစီးမှု. ရေအေးကိုတိုက်ရိုက်ပြန်လည်အသုံးပြုသည်. မြင့်မားသောအပူချိန်မြင့်မားသောဖိအားရေပြင်ဆင်နေ. မြင့်မားသောအပူချိန်မြင့်မားသောဖိအားကိုသုတ်ခြင်း. ရေခဲရေနှင့်အပူချိန်မြင့်မားသောအအေး. စုစုပေါင်းစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုမှတ်တမ်းတင်ရန် Watt မီတာ. စုစုပေါင်းရေနွေးငွေ့သုံးစွဲမှုမှတ်တမ်းတင်ရန်ရေနွေးငွေ့မီတာ.
အကောင်းဆုံး Flow Rapid ဆိုးဆေးစက် 110 OverC ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် Flow Rapid ဆိုးဆေးစက် 110 OverC ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ Flow Rapid ဆိုးဆေးစက် 110 OverC ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
အသိဉာဏ်ပေါ်သယ်ဆောင်မြင့်မားသောဖိအားစဉ်ဆက်မပြတ်အမြန်ဆေးဆိုးစက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်မူပိုင်ခွင့်နှင့်အတူမျိုးဆက်သစ်ဆေးဆိုးစက်. တော်လှန်ရေးသမားဆန်းသစ်တီထွင်မှု,ပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေ. 65 ကျော်ကိုသိမ်းပါ%ရေ,ရေနွေးငွေ့,လျှပ်စစ်ဓာတ်အား,နှင့်အရန်,65 လျှော့ချ%ရေဆိုးနှင့် CO2 ထုတ်လွှတ်မှု၏. ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်မူပိုင်ခွင့်,ယူရိုအပါအဝင်,ဦး.S.က.,ဦး.ငွေကျပ်.,အီတလီ,ဂျာမနီ,တရုတ်,ထိုင်ဝမ်,ဂရိ,ကြက်ဆင်,အိန္ဒိယ,ဂျပန်,ထိုင်းနိုင်ငံ,အင်ဒိုနီးရှား,မလေးရှား,ဗီယက်နမ်,ကိုရီးယား&မင်္ဂလာပါ;&မင်္ဂလာပါ;စသည်တို့.,200 ကျော်အပိုင်းပိုင်းမူပိုင်ခွင့်စုစုပေါင်း. Won Distinguished Enterprise Innovation Award နှင့်ထိုင်ဝမ်အစိုးရမှထိုင်ဝမ်ထူးချွန်ဆုတို့ကိုချီးမြှင့်သည်. စိမ်းလန်းသောစီးပွားရေးကိုရရှိရန်အတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်လိုက်ဖက်သောဆိုးဆေးအိမ်များကိုထပ်မံဖြည့်တင်းပါ. SDG သို့ရောက်ရှိပါ’ရည်မှန်းချက်များ. အလွန်တိုတောင်းသောအရက်အချိုး:၁:2.5~3.5
Flow Rapid Dyeing Machine ကျော်မြင့်မားသောအပူချိန် အင်္ဂါရပ်များ စီးဆင်းမှုဆေးဆိုးခြင်းစနစ်အထူး အလွန်အမင်းနိမ့်အရက်အချိုးအစား ဆေးလုံးအခမဲ့,နိမ့်တင်းမာမှု,မြင့်မားသော elasticity CREASE MARK UNIFORM ဆေးဆိုးခြင်းများအခမဲ့ဖြစ်သည် ပိတ်ထည်ထဲကနေပျံ့နှံ့ အာကာသလိုအပ်ချက်သိမ်းဆည်းပါ ရွေးချယ်စရာ ရွေးချယ်စရာအထူးကိရိယာများ အမှန်တကယ်ထည်လည်ပတ်မှုမြန်နှုန်းနှင့်လည်ပတ်မှုနှုန်းတစ်ခု၏လည်ပတ်ချိန်ကိုပြသနိုင်သည့်အပြင်ချုပ်ရိုးကိုအလိုအလျောက်ရှာဖွေပေးသည်. တိကျစွာရေအဆင့်ကိုထိန်းချုပ်ရန်စီးဆင်းမီတာ. ဒုတိယဓာတုပစ္စည်းတိုင်ကီသည်ဆိုးဆေးနှင့်ဓာတုပစ္စည်းများကိုသီးခြားစီပြင်ဆင်ရန်. ဆိုးဆေးအချိန်ဆိုးဆေးသက်သာစေရန်ရေကို preheating များအတွက် tank preheating. ယိုစီးမှုမြန်စေရန်စွမ်းအင်ယိုစီးမှုစနစ်. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
Flow Rapid Dyeing Machine ကျော်မြင့်မားသောအပူချိန် အင်္ဂါရပ်များ အလွန်နိမ့်ယိုယွင်းမှုဆိုးဆေးဆိုးဆေး CREASE MARK အခမဲ့ဖြစ်သည်,အထည်ထိထိတွေ့မှုကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ ပိတ်ထည်ထဲကနေပျံ့နှံ့ UNIFORM ဆိုးဆေး အလိုအလျောက်ဓာတုဆေးထိုးစနစ် စီးဆင်းမှုဆေးကြောစနစ်အထူး အနိမ့်တင်းမာမှုနှင့် PILLINGLESS အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
ကျော် Flow ပုံမှန်ဖိအား Rapid ဆိုးဆေးစက် မူပိုင်ခွင့်ဆေးဆိုးစနစ်အားဖွငျ့ဖွစျသညျ,ဆေးပြားနဲ့တူအားလုံးချို့ယွင်းချက်,ဖွဲ့စည်းပုံပုံပျက်သောနှင့်တွန့အမှတ်အသားများလုံးဝတားဆီးနိုင်ပါတယ်.အပြင်,အလွန်ကောင်းမွန်သောကျုံ့ထိန်းချုပ်မှုကိုတင်းမာမှုမှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်သည်-ဇာထိုးအထည်များအတွက်လျတ်ဆေးဆိုး၏လျော့နည်း. အထူးအတွက် ဝါဂွမ်းထည် သိုးမွှေး နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအဝတ်အထည်များ,ကဲ့သို့:SPANDEX(LYCRA),Terry,VELOR,TOWEL&မင်္ဂလာပါ;&မင်္ဂလာပါ;ETC. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ